Qaramada Midoobay oo ku dhawaaqday iney Somalia ka jirto xaalad adag – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 9 May 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, danjire Nicholas Kay ayaa sheegay in xaaladda bini’aadannimo ee Soomaliya ay tahay mid daran oo u baahan in wax laga qabto.
Danjire Kay ayaa daboolka ka qaaday inay jirto xaalado beni’aadanimo oo deg deg ah oo u baahan in wax laga qabto, isagoo xusay in hay’adaha deeqda bixiya looga baahanyahay sidii ay uga jawaabi lahaayeen meelaha xaaladaha deg dega ah ay ka jirto.
Bogga internet-ka ee howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) ayaa maanta lagu daabacay in danjiraha uu ka walaacsan yahay in carruur iyo haween badan ay soo foodsaarto cunno-yari, isagoo xusay in ay xaaladdu tahay mid adag oo dhab ah.
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nickolas Kay ayaa hey’adaha Caalamka ugu baaqay inay kordhiyaan taageerada dhinaca gargaarka ee Soomaaliya, si gurmad beni’aadanimo loola gaaro dadka ay biyo la’aanta saameysay.
Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bani’aadannimada ayaa sheegay in lacagta sanadkan loo baahan yahay in wax looga qabto dhibaatada bini’aadannimo oo gaareysa $790 Milyan oo doollar ay boqolkiiba 15 oo kaliya gaartay Soomaaliya.
Golaha Wasiirrada ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqay in xaalad biyo iyo cunto yari ah ay ka jirto dalka.
Malaysian police arrest al-Shabab suspect